January 13, 2022 - Achawlaymyar
January 13, 2022 by Achawlaymyar
ဆံပငျကိုမညျးနကျစမေယျ့အုနျးဆီသံပုရာသငျရဲ့ဆံသားတှဖွေူလာလို့နရေတာမြိုးဒါမှမဟုတျအခွားဆံပငျမညျးနကျစမေယျ့ဆေးတှသေုံးနရေတာမြိုးတှရှေိပါသလား။ ဒါဆိုရငျတော့သဘာဝအတိုငျးပွနျမညျးနကျစမေယျ့နညျးလမျးတဈခုကို မြှဝခေငျြပါတယျ။သဘာဝနညျးလမျးတှဟောလကျတှမှေ့ာအသုံးဝငျပွီးဘေးထှကျဆိုးကြိုးနညျးစမေယျ့အရာတှပေါစားသုံးရတဲ့အစားအစာတှထေအခွားအသုံးဝငျ မယျ့ဆေးဝါးတှကေုထုံးတှဓောတျစာတှအေနနေဲ့အသုံးပွုလို့ရပါတယျ EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com သဘာဝကပေးတဲ့နညျးလမျးတှဟောအမွဲအထောကျအကူဖွဈစပေါတယျအုနျးဆီဟာဆံကသောကောငျးကြိုးကိုမြားစှာအထောကျအကူဖွဈစတောသိကွမှာပါသူ့မှာ ပါဝငျတဲ့ဓာတျပေါငျးစုတှဟောဆံသားရဲ့အတှငျးပိုငျးအထိထိရောကျမှုရှိ တယျလို့ဆိုပါတယျဆံသားတှကေိုစိုပွညျစပွေီးမညျးနကျခငျြတယျဆိုရငျတော့အုနျးဆီဟာမပါမဖွဈပါပိုပွီးအထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ဗီတာမငျစီ၊ဖော့စရပျ၊ဗီတာမငျ ဘီနဲ့အငျတီအောကျဆီးဒငျ့တှပေေါငျးစပျပေးရငျပိုကောငျးမှနျတဲ့ဆံပငျ ဆေးကိုရရှိစမှောပါ။ပေါငျးစပျရမှာကတော့သံပုရာသီးဒါမှမဟုတျသံပုယိုသီးပါပေါငျးစပျပွီးပွုလုပျရမှာကတော့အုနျးဆီ5mlနဲ့သံပုရာရညျလကျဖကျရညျဇှနျး၃ဇှနျးပါ သူတို့နှဈခုကိုရောစပျပွီးဆံသားထဲကိုအနှံသုတျပေးပါညငျညငျသာသာ လေးနှိပျပေးပွီး၄၅မိနဈထားပါ။ပွီးရငျခေါငျးလြှျောပါတဈပတျမှာ၂ကွိမျပုံမှနျလုပျပေးပါဗောကျတှကေိုလညျးသကျသာစပွေီးဆံသားကိုပွနျပွီးမညျးနကျလာစပေါတယျ မတေ့်တာဖွငျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ဆံပင်ကိုမည်းနက်စေမယ့်အုန်းဆီသံပုရာသင်ရဲ့ဆံသားတွေဖြူလာလို့နေရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အခြားဆံပင်မည်းနက်စေမယ့်ဆေးတွေသုံးနေရတာမျိုးတွေ ရှိပါသလား။ဒါဆိုရင်တော့သဘာဝအတိုင်းပြန်မည်းနက်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါတယ်။သဘာဝနည်းလမ်းတွေဟာလက်တွေ့မှာအသုံးဝင်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းစေမယ့်အရာတွေပါစားသုံးရတဲ့အစားအစာတွေထအခြား အသုံးဝင်မယ့်ဆေးဝါးတွေကုထုံးတွေဓာတ်စာတွေအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် သဘာဝကပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာအမြဲအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အုန်းဆီဟာ ဆံကေသာကောင်းကျိုးကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေတာ သြိ ကမှာပါ။သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းစုတွေဟာဆံသားရဲ့အတွင်းပိုင်းအထိထိရောက်မှုရှိ တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆံသားတွေကို စိုပြည်စေပြီးမည်းနက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အုန်းဆီဟာမပါမဖြစ်ပါပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ဗီတာမင်စီ၊ဖော့စရပ်၊ဗီတာမင်ဘီ နဲ့အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေပေါင်းစပ်ပေးရင်ပိုကောင်းမွန်တဲ့ဆံပင် ဆေးကိုရရှိစေမှာပါ။ပေါင်းစပ်ရမှာကတော့သံပုရာသီးဒါမှမဟုတ်သံပုယိုသီးပါ။ပေါင်းစပ်ပြီးပြုလုပ်ရမှာကတော့အုန်းဆီ5mlနဲ့သံပုရာရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၃ဇွန်း ပါသူတို့နှစ်ခုကိုရောစပ်ပြီးဆံသားထဲကိုအနှံသုတ်ပေးပါညင်ညင်သာသာ EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. … Read more
ပန်းရံဆရာကြီးတွေနေတဲ့တိုင်းပြည် ( အရပ်ထဲမှာ အိမ်ဆောက်တော့ ပန်းရံဆရာတွေကို မလှန်ရဲပါဘူး။ သူတို့က ဆရာကြီးတွေပါပဲ….ဒီလို ပန်းရံဆရာကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောနိုင်အောင် ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ပါ…)
ပန်းရံဆရာကြီးတွေနေတဲ့တိုင်းပြည် ( အရပ်ထဲမှာ အိမ်ဆောက်တော့ ပန်းရံဆရာတွေကို မလှန်ရဲပါဘူး။ သူတို့က ဆရာကြီးတွေပါပဲ….ဒီလို ပ န်းရံဆရာကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြောနိုင်အောင် ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ပါ…) အရပ်ထဲမှာ အိမ်ဆောက်တော့ ပန်းရံဆရာတွေကို မလှန်ရဲပါဘူး။ သူတို့က ဆရာကြီးတွေပါပဲ။ တစ်ကယ်လည်း ဆရာတွေပါပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ လ က်တွေ့လုပ်လာခဲ့တာပဲလေ။ သို့ပေမယ့် တချို့ ပညာရပ်အသိလေးတွေတော့ ညှိယူသင့်ပါတယ်။ သံချောင်းပါရင် RCဆိုပြီး Okay ပါပြီ။ အဲဒီမှာ Cover လို့ခေါ်တဲ့ သံချောင်းရဲ့ အစွန်ဆုံးမျက်နှာပြင်ဟာ ကွန်ကရစ်ထဲမြု ပ်နေစေရပါတယ်။ အောက်ဆုံး အုတ်ဖိနပ် footing လို မြေကြီးနဲ့ ထိနေတဲ့ နေရာမျိုးမှာ အနည်းဆုံး ၂ လက်မလောက် ဘေးက ကျောက်ပုံးနဲ့ သံ ကွာနေစေရပါမယ်။ ရေငန်ဒေသတွေဘက်မှာဆို … Read more